Wararka - Waxaan qabanay dhoolatus dabeed subaxdii Oktoobar 9, 2020
Waxaan qabanay tababar dabka subixii Oktoobar 9, 2020
Si loo xoojiyo dhammaan wacyiga shaqaalaha ee badbaadada dabka, loona hagaajiyo xirfadahooda wax ku oolka ah ee ka hortagga dabka iyo ka hortagga aafooyinka, sidoo kale looga hortago shilalka ku dhaca burooyinka, waxaan si guul leh ku qabanay tababar dabka subixii Oktoobar 9, 2020, taas oo ah mid bil ka hor maalinta badbaadada dabka qaranka. In kabadan 100 qof oo ka kala socda waaxda wax soosaarka, kooxaha qaraabada ah ee ka shaqeeya iyo kooxaha amniga ayaa ka qeyb galay tababarka dabka.
Kahor bilowgii tababbarka, maareeyahayaga guud ee Alex wuxuu sameeyay abaabul, wuxuu sharraxay sharciyada tartanka iyo qodobbada dareenka. Dabayaaqadii xagaaga iyo horraantii dayrta, heer kulku wali aad buu u sarreeyaa, badbaadada dabka ee shirkadda ayaa noqotay mudnaanta koowaad ee shaqada soo saarista badbaadada. Dhoolatuskan, dhammaan shaqaaluhu waxay ku wanaajiyeen wacyigooda badbaadada dabka iyo xirfadaha iscaawinta, taasoo door wanaagsan ka ciyaareysa wax soo saarka badbaadada iyo qoyska badbaadada mustaqbalka. Hogaamiyaha kooxda amniga ayaa si qoto dheer u sharaxay adeegsiga aaladaha dab damiska wuxuuna tusay waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Qodobkan muhiimka ah ee la-dagaallanka dabka waa la wada xusuustay dhammaanteen.
Tababarka ka dib, maareeyaha wax soosaarka Mr. Li wuxuu ugu yeeray dhammaan shaqaalaha inay bartaan oo ay bartaan aqoonta badbaadada dabka isla markaana ay sare u qaadaan wacyiga badbaadada. Markuu dab kaco, waa inaan si deggan ula macaamilnaa oo aan ka qabannaa shaqo wanaagsan ka hortagga badbaadada. Waxaan rumeysan karnaa in tababarkani uu bixin doono khibrad wax ku ool ah oo wax ku ool ah iyo shaqo degdeg ah oo degdeg ah mustaqbalka, iyo sidoo kale inuu aasaas adag u dhigo wax soo saarka amniga maalinlaha ah!
Waqtiga boostada: Oktoobar-09-2020